Ubudala beZiko lokuTshisa laseCanada liPhondo kunye neSithili
AmaPhondo kunye nemimandla baye babeka i-18 ne-19 njengeminyaka yabo yokutshaya ngokomthetho
Umda wokutshaya ngokomthetho eCanada ngumdala apho umntu avunyelwe ukuthenga iimveliso zecuba, kuquka i-cigarettes. Umda wokutshaya ngokomthetho eCanada usetyenziswa yiphondo ngalinye nommandla waseCanada. Ukuthenga iteksi kukwahlukana ngakumbi okanye ngaphantsi kweeminyaka eli-18 ukuya kwe-19 kumaphondo nakwiindawo ze-Canada:
Ubudala bokuTshisa eMthethweni kumaPhondo nakwiindawo zaseKhanada
- Manitoba - 18
ENew Brunswick - 19
ENewfoundland naseLabrador - 19
Amantla eNtshona-ntshona - 18
I-Prince Edward Island - 19
ESaskatchewan - 18
Ukuthengisa iteksi kugxininiswe ngokubanzi kwiindawo ezininzi. Ngokomzekelo, e-Ontario, umthengisi, ogama lakhe lingagunyazisiweyo, kufuneka acele ukuchongwa kuye nawuphi na umntu obonakala engaphantsi kweminyaka engama-25 ubudala, kwaye umthengisi makangqine ukuba umthengi ubuncinane ubuneminyaka engama-19 ngaphambi kokuthengisa iimveliso zecuba kuloo mntu.
Ukubhema kuvinjelwe kwiiNdawo zikaRhulumente eziPhakathi
Ukususela ngo-2010, yonke imimandla kunye namaphondo kunye norhulumente wezepolisi baye bamisela umthetho ongaqhelekanga wokunqanda utshaya loluntu kwimimandla yabo. Umthetho uvimbela ukutshaya kwiindawo zomphakathi zangaphandle kunye neendawo zokusebenzela ezifana neendawo zokutya, imivalo kunye nekhasino. Ukuvinjelwa kuka rhu lumente kusebenza kwiindawo zokusebenzela zentlangano kunye namashishini alawulwa ngumbutho afana namaziko eenqwelo-moya.
Kukho inkxaso enyukayo yokukhulisa ubuncinane obungaphantsi komthetho wokubhema kwi-21 kulo lonke ilizwe ukwenzela ukuba kufumaneke ukufikelela kwenkcaso kunzima kwaye kunciphise ukugula kunye nokufa kweengcambu. Abantu abangaba ngu-37,000 bafa eCanada minyaka yonke besuka kwizifo eziphathelele ukutshaya.
I-Movement Yokuphakamisa UmThetho Wokubhema Kwezomthetho ukuya kwi-21
Urhulumente wesigqeba usiphakamisile ekuqaleni kuka-2017 ukuhambisa umda wokutshaya ngokomthetho ukuya kwi-21.
Ingcamango yokukhulisa ubuncinane bokuguga ibanga yaqhutyelwa phambili kwiphepha leMpilo Canada ngokuqwalasela iindlela zokufikelela kwiipesenti ezingama-5 zomhlaba wokutshaya ngo-2035. Ngo-2017, kwakunama-13 ekhulwini.
I-federal government ingabonakali ukuba inokuphakamisa ubuncinci bexesha lokutshaya ukuya ku-21. Injongo yayiza kuba ukuzama nokunciphisa inani labantu abatsha abayithatha umkhwa.
UMphathiswa wezeMpilo waseFransi uJane Philpott uthi, "Ixesha lokususa imvulophu. Ziziphi na iinyathelo ezilandelayo? Sifake iingcamango ezinesibindi, izinto ezinjengokuphakamisa ubudala bokufikelela kwizinto ezifana nezinto zokubeka izithintelo ngokweendawo zokuhlala ezininzi. ukuva oko abantu baseCanada bacinga ngabo [iingcamango]. "
I-Cancer Society iyamxhasa ukuphakamisa i-Minimum Age
I-Canada Cancer Society ithi isekela imbono yokubeka umda wokutshaya wama-21.
URob Cunningham, uhlalutyi lomgaqo-nkqubo ophakamileyo kunye noluntu, uthi ukholelwa ukuba ukuphakamisa ukuguga kungenakuphepha kwaye ucacisa ukufundisisa ngo-2015 yiSizwe soMnxeba weSizwe wase-US, okubonisa ukuba ukukhulisa umda wokutshaya ngokomthetho ukuya kwi-21 kunokunciphisa izinga lokutshaya malunga neepesenti ezili-12 kwaye ekugqibeleni banciphise ukufa kwabantu abasebenzisa ukutshaya ngama-10 ekhulwini.
Uphononongo lubonisa ukuhlaselwa kwabokubhema
Kwikota yokuqala ka-2017, iqela likazwelonke oogqirha be-Smoke-Free Canada (i-PSC) likhuphe i- survey yezempilo kwi-2000-201 ye-tobacco use eCanada.
Ngeli xesha, kukho i-1.1 yezigidi ezilahla kwinani lababhemayo baseCanada, ngelixa inani lababhemayo abaneminyaka eli-15 ukuya kwe-19 liye lahla kodwa lahlala likhulu.
Ipesenti yabantu baseCanada ababhemayo bawa ngekota enye, ukusuka kuma-26% aseKhanadi abaneminyaka eli-12 okanye ngaphezulu ukuya kuma-19%. Ngethuba lokufunda i-ONLINE, uninzi lwabantu abaneminyaka engama-20 ukuya ku-29 abaye bamtshaya babika ukubhema i-cigaret yokuqala yokuqala phakathi kweminyaka eyi-15 no-19, ngelixa ipesenteji zalabo babika igqabi lokuqala ngaphezu kweminyaka engama-20 ukususela kuma-7 ukuya kweepesenti ezi-12.
Hlola iipaki zeSizwe kunye nePhondo kwiCanada
Indima yePhondo yokuqala kwiCanada
Umvelaphi wegama elithi Nunavut
I-T4 yaseThanada yeNtlawulo
IPalamente yaseKhanada: iNdlu yeeNgingqi
I-T3 (Ingxelo yeTrust Trust and Distribution)
Ixesha lexesha le-Prime Ministers laseKhanada
I-T4A yentlawulo yeRhafu yeeRhafu zeNgeniso zeCanada
St. John's, iNqununu yaseNewfoundland neLabrador
Iindlela ezi-5 zokuhlawula iintlawulo zakho zeeNkcazo zeCanada
Ukwenziwa kwengubo yeboya
Isihlandlo seZibalulekileyo ezibalulekileyo kuJulius Caesar
Ukwahlukana Kwemimandla yeSpeyin
Indlela yokuhlaziya i-Jib usebenzisa i-Telltales
Iilwimi zemiGangatho yeJamani: Ukudibanisa kwe-Muessen, uSollen, uWollen
I-Coraline nguNeil Gaiman - iNewbery Medal Winner
Kwi-Glance: Umlando weJazz
Imithetho emihlanu yeJazz Jazz
Ukucela imvume kwiNgesi
Ukuthi "Ngaba" ngesiSpanish
Ngaba Abafundi be-Ski benza ntoni?
Shri Adi Shankaracharya uShankara wokuqala
Iimvumi zeeMandla eziPhezulu zoLwandle oluPhambili lwee-1990
Umncintiswano wokuCima phakathi kwe-Athena neArachne
I-Covalent okanye i-Molecular Compound Properties
I-Gemini neLibra Uthando olufanelekileyo
Ukuxhomekeka kweeTrans, ukusuka kwiPisa kunye nangaphezulu
Izibalo ezihambelana noMhla kaBawo